Archive du 20180413
Fanairana ny fanjakana be marenina Hidina an-dalambe ny sendikan’ny mpiasa
Omaly no nanao fanambarana tetsy amin’ny hotely Grand Mellis Analakely ny Sendikalin’ny Mpiasa mivondrona ao amin’ny Fiaraha-midinika ny Mpiasa Malagasy (CTM) sy ny SSM (Solidarité Syndicale de Madagascar).
Asam-panjakana Lasibatry ny politika maloto
Isaky ny filankevitry ny minisitra no matetika hisian’ny fanesorana tompon’andraikitra ambony isan-karazany amina minisitera na sampandraharaham-panjakana lehibe eto amintsika.
Andry Rajoelina Tsy te hitazona ny anarana MAPAR ?
Tsikaritra tsy te hitazona an’io anarana MAPAR io intsony i Andry Rajoelina, fa toa nivadika tanteraka any amin’ny fampalazana ilay hoe IEM (Initiative pour l’Emergence de Madagascar).
GAAMM Miantso ny mpanao politika mba hahay hifandamina
Nivoaka tamin’ny fahanginana omaly ireo tanora mivondrona ao amin’ny « Génération en Action pour l’Avenir meilleur de Madagascar » na ny GAMM tarihin’ny filoha nasionaliny Jean Jusmin Ravalimbavaka.
Fitakiana sy fanehoan-kevitra Diabe ny eto Iarivo amin’ny 8 mey
Nanambara ny hiroso amin’ny diabe eto Antananarivo, izay misalotra ny anarana hoe “Diaben’ny Fampihavanana sy ny fanavotam-pirenena” ny Federasionin’ny gadra politika na ny FEDEP sy herivelona maro eto amin’ny firenena ny 8 mey ho avy izao.
Mpitondra malagasy Lavitry ny fenitra
Nalaza tamin’ny tetezamita nanomboka ny taona 2009 izay anisan’ny loharano nipoiran’izao fitondrana HVM izao ny teny hoe manara-penitra.
Vono sy ratra iniana hatao Mety mampigadra ka ilana fitandremana
Betsaka ireo tranga eny anivon’ny fiarahamonina andrenesana vono sy fandratrana olona amin’izao.
Fanambaran’ny jeneraly misotro ronono Namaly bontana ny minisitry ny fiarovana
Namaly bontana ny fanambarana nataon'ireo miaramila manamboninahitra misotro ronono tetsy amin'ny Hotely La Rotonde Besarety ny alarobia teo ny minisitry ny fiarovam-pirenena ny Jeneraly Béni Xavier Rasolofonirina omaly.
Baolina kitra - FMF Mitaky fifidianana tena demokratika ny FIFA
Nilatsaka ny fanapahan-kevitry ny FIFA izay miantso ny federasion’ny baolina kitra Malagasy (FMF) hiantso fivoriambe tsy ara-potoana mba hanamafisana indray mandeha indray ireo mpikambana eo anivon’ny vaomieran’ny fifidianana (commission electorale) sy ny vaomieran’ny fitarainana sy fitoriana momba ny voka-pifidianana (commission de recours pour les éléctions).
Fosa Juniors Boeny Vonona ny handavo ny Aduana Stars Ghana any Mahajanga
Ny alarobia 11 aprily 2018 teo no tafaverina any Mahajanga ny ekipan’ny Fosa Juniors Boeny avy niatrika ny lalao mandroson’ny 1/16-ndalana Bis tamin’ny ekipan’ny Aduana Sports tany Ghana tamin’ny alahady 8 aprily lasa teo ka nigoka fandresena 6-1 be izao.
Fandraharahana Malagasy Mitohy hatrany ny fanapotehana
Mitaraina hatrany ny mpandraharaha Malagasy ny amin’ny famonoana azy ireo.
Fiaingan’ny toekarena Malagasy Ilaina ny fampandrosoana ny faritra
Ankoatra ny fitoniana ara-politika dradradradraina mandrakariva dia antoky ny fiaingan’ny toekarena ny fampandrosoana ny faritra.
Kaonty M-KAJY Hanampy ny olona amin’ny fahafahana mihindram-bola
Betsaka ireo olona manana tetikasa hahafahana mivelona sy manatsara fiainana amin’izao saingy ny lela-vola ho enti-manatontosa izany mihitsy no tsy misy.
Fananganana tranom-pamokarana Tena mila vola be
Miroborobo hatrany ny fananganana tranom-pamokarana eto amintsika. Misy hatrany ireo vaovao vao natsangana hampahafantarina ny sarababem-bahoaka.
Zandarimaria Malagasy-Frantsay Mihamafy hatrany ny fiaraha-miasa
Nanao fitsidihana ny foibem-pibaikoana ny zandarimariam-pirenena tao amin’ny Toby Ratsimandrava omaly 12 aprily maraina ny Général de Brigade Xavier Ducept, Komandin’ny zandarimaria ao amin’ny Nosy La Réunion.
Pretra « Pédophile » any Chili Niala tsiny ny Papa François
Niala tsiny ny Papa Ray Masina François noho ny fahafaham-baraka mahazo ny Eglizy any Chili avy amin’ilay raharaha maloto mahakasika Pretra nanao fihetsika mamoafady tamina ankizy.
Vidin’entana eny amin’ny mpamongady Tsy nisy fiakarana aloha hatreto
Taorian’ny fiakaran’ny solika sy ny fanambaran’ny fikambanan’ny mpitatitra ny amin’ny fisondrotan’ny saran-dalana ho 700Ar amin’ny 25 aprily ho avy izao dia tsy mbola nisy fiovana aloha ny vidin’entana eny amin’ny mpamongady.
Karazan-doka Miha mahazo vahana indray
Mitombo isa hatrany ny Malagasy tia miloka amin’izao. Tsy mifidy saranga na taona intsony fa hatramin’ny ankizy mpianatra aza tafarotsaka koa.